Chautari Daily » धन कमाउन विदेश पुगेका ४० भन्दा धेरै नेपाली चेली अलपत्र
धन कमाउन विदेश पुगेका ४० भन्दा धेरै नेपाली चेली अलपत्र
काठमाडौं १८ असार / चीनमा ४० जनाभन्दा बढी नेपाली महिला म्यान पावर कम्पनीमार्फत् एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा पुगेको तर ती महिलाहरूसँग कामका लागि आवश्यक किसिमको राहदानी नभएको, आवश्यक सीप पनि नरहेको र भनेको भन्दा निकै कम तलबमा काम गर्नुपरेको खबर सार्वजनिक भएका छन्।
नयाँ ‘केस’ हो। चीनको ल्याओनिङ प्रान्तको एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीले नेपालको म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर र नेपालको श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ।
चीन सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कामकाज गर्ने ‘जेड’ भिसा प्राप्त हुन्छ।
काम नजानेको भएर दुःख पाए भन्नुभएको?
चीनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् त्यहाँ नेपालीहरू काममा आएका छन् भन्ने थाहा पाएँ। त्यसपछि ‘वीच्याट’ ठेगाना लिएर कुराकानी गरेँ। उनीहरूले भिडिओ कल गरेर बस्ने ठाउँ देखाए। उनीहरूको अवस्था सबै मलाई सुनाए।
अहिले पनि उनीहरू त्यही गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा छन् उसो भए? गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको कम्पाउण्डभित्र बस्ने ठाउँ दिएको छ। एउटा कोठामा चारवटा खाट छ जसमा आठजना बस्छन्।
त्यहाँ बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले दुःख पाएको समाचार पनि तपाईले प्रेषित गर्नुभएको थियो। अनि चिनियाँ डान्स रेष्टुराँहरूमा पनि नेपाली युवतीहरू पुर्‍याइएका छन् भन्छन् नि?
तस्वीर : चेतनाथ आचार्य
प्रकाशित मिति १८ असार २०७६, बुधबार ०३:०३